यी हुन् विश्वका शक्तिशाली हतियारहरु - Medianp.com
यी हुन् विश्वका शक्तिशाली हतियारहरु
मिडिया एनपी १प्रकाशित मिति: बुधबार, बैशाख ०६, २०७४१५:३२0	एजेन्सी, विश्वका कतिपय मुलुक अझै गरिबीको चपेटामा गुज्रिरहेका छन् तर कति मुलुकहरु अत्याधुनिक हतियार बनाउँदै आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गरिरहेका छन् । आज हामी यस्ता शक्तिशाली हतियारको बारेमा जानकारी गराउँदै छौँ । जसमा दुनिया सखाप पार्ने शक्ति छ ।
१.M51 – SLBM फ्रान्स
यसलाई फ्रान्सको सबैभन्दा शक्तिशाली मिसाइल मानिन्छ । यसको मार क्षमता ११ हजार कि.मि. रहेको छ । यसको भित्री भागमा सुपर कम्प्युटर र नेभिगेशनल सिस्टम राखिएको छ । जसले आफ्नो लक्ष्यमा मार लगाउँछ ।
२.DF-31/31A – ICBM चीन यसको वास्तविक नाम डान्ग फंैग ३१ हो । सन् २००६ मा चिनले यसलाई आफ्नो सेनामा सामेल गरेको हो । यसको मार क्षमता ८ हजार किलोमीटर छ । यसको एडभान्स भर्सनको मार क्षमता ११ हजार किलोमीटर रहेको छ ।
३.RT-2UTTKh Topol-M – ICBM रूस यसलाई रसियन आर्मीमा १९९७ मा सामेल गरिएको छ । यसलाई को नामले पनि बोलाईन्छ । यसको मार क्षमता १०,५०० कि.मी. रहेको छ ।
४. RS-24 Yars – ICBM रूस यो मिसाइलको निर्माण अमेरिकाका राष्ट्रपछि जर्ज डब्लु बुसले अमेरिाकामा बनाएको मिसाइलको जवाफमा बनाईएको थियो । यसको विशेषता भनेको यसले आफ्नो दिशा बदल्न सक्छ । यसले ११ कि.मी. सम्म मार हान्न सक्छ ।
५.LGM-30G Minuteman III – ICBM ( USA )
यो प्रकृतिको २ वटा मिसाईल १९६२ र १९६५ मा बनेको छ । यसको विषेशता भनेको हावाको जस्तोसुकै अवरोध पनि पार गरेर विष्फोट हुन्छ । यसको मार क्षमता १३ हजार कि.मी. रहेको छ ।
६.RSM-56 Bulava – SLBM रूस यो मिसाइल २०१३ मा बनेको हो । यसको डिजाइन इन्स्टिच्युट अफ थर्मल टेक्नोलोजी रसियाले बनाएको हो । यसको मार क्षमता साढे ८ हजार कि.मी. रहेको छ ।
७.R29RMU2 Layner – SLBM रूस यसलाई २०१४ मा रशियन डिफेन्स यूनिटमा सामेल गरिएको छ । यसले एक पटकमा १२ वटा लक्ष्यमा मार हान्न सक्छ । यसको मार क्षमता ११ हजार कि.मी. रहेको छ ।
८. UGM-133 Trident II – SLBM (USA/UK)
यो मिसाइल बनाउन युके र अमेरिकाको फोर्स सामेल गरिएको थियो । यसले एकैपटकमा १४ वटा लक्ष्यमा मार हान्न सक्छ । यसको मार क्षमता ८ हजार देखि ११ हजार कि.मी. सम्म रहेको छ ।
९.DF-5/5A – ICBM चीन यसले पलभरमै पुरै शहरलाई खत्तम बनाउन सक्छ । यसको मार क्षमता १२ हजार कि.मी. रहेको छ ।
१०. R-36M2 – ICBM रूस यसलाई नाटो द्वारा SS -18 Satan नामले पनि बोलाईन्छ । यसले एकै समयमा २० देखि २५ वटा लक्ष्यमा मार हान्न सक्छ । यसको मार क्षमता ११ हजार कि.मी. रहेको छ ।
‘मनले चाहेको पुर्‍याउने मैतीदेवी’अष्ट्रेलियामा चम्किए कमल, आस्था र अबुन